I-China Mobile Homogenizing Pump ene-Hopper Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki | Qiangzhong
* Imininingwane engenhla ingeyenkomba kuphela futhi ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende. 'Le mishini ingenziwa ngezifiso ngokuya kohlobo lwezinto zokusetshenziswa ukuhlangabezana nezidingo zenqubo, njenge-viscosity enkulu, i-homogenization nezinye izidingo.
Iphampu ye-emulsification (ebizwa nangokuthi ku-line-shear high dispersion mixer) iyinsimbi yokuxuba esebenza kahle kakhulu ehlanganisa ukuxubana, ukusabalalisa, ukuchoboza, ukuncibilika, okuhle, ukwehlisa amandla, i-homogenization kanye ne-emulsification, izingxenye zayo ezisebenza ikakhulu i-stator ne-rotator, I-Rotor ijikeleza ngokushesha ukukhiqiza amandla we-centrifugal namandla we-hydraulic kanti i-stator ihlala imile. Ngokuhlanganiswa okuqondile kwe-Rotor ne-stator, kukhiqizwa amandla aqinile wokugunda ngesikhathi sokujikeleza ngesivinini esikhulu, futhi okokusebenza kufakwa kusheya okuqinile, ukukhishwa kwe-centrifugal, ukuqhekeka komthelela, ukungqubuzana kuketshezi, kanye nesiyaluyalu esifanayo. Ngakho-ke, imithombo yezindaba ehlukahlukene efana nesigaba esiqinile esingabonakali, isigaba samanzi, kanye nesigaba segesi kuhlakazekile ngokufanayo nangokukhanyayo futhi kuqiniswe ngomzuzwana. Ngemuva komjikelezo wokubuyisela emuva, umkhiqizo ozinzile futhi osezingeni eliphezulu ekugcineni utholakala.
I-emulsification pump / in-line high-shear dispersion mixer ingasebenza kahle, ngokushesha, futhi ngokulinganayo isabalalise isigaba esisodwa noma ngaphezulu kwesinye isigaba esiqhubekayo, ngenkathi esimweni esijwayelekile izigaba zingaguquki. Nge-shear ephezulu yomugqa we-velocity okhiqizwe ngejubane elikhulu lokuzungeziswa kwe-rotor namandla amakhulu we-kinetic alethwe imvamisa yomphumela womshini, into esegebe elincanyana le-rotor ne-stator iphoqelelwa ngeshear eqinile yomshini ne-hydraulic, i-centrifugal extrusion, ungqimba lwamanzi ukungqubuzana, umthelela wezinyembezi nesiyaluyalu neminye imiphumela ebanzi. Lokho kwenza isigaba esingahambelani esiqinile, isigaba samanzi kanye nesigaba segesi ngaso leso sikhathi esenziwe ngo-homogenized, sahlakazeka futhi saqiniswa ngaphansi kwesenzo esihlanganisiwe sobuchwepheshe obuhambisanayo obuhambisanayo kanye nenani elifanele lezithasiselo. Ekugcineni imikhiqizo ezinzile nekhwalithi ephezulu iyatholakala ngemuva kwemijikelezo ephindaphindwayo yemvamisa ephezulu.
Amagumbi amathathu e-stator ne-rotor afakiwe egumbini lokusebenza lepompo ye-emulsification. Ukudluliswa shaft ekamelweni ukusebenza is cantilevered. Ukuhlanganiswa okunwebeka kuxhuma i-motor kanye ne-spindle ezindlini ezithwele ukwenza ngcono ikhwalithi yokusebenza kwe-shaft yokudlulisela. Amafomu wokubekwa uphawu angakhethwa ngokuya ngezimo zomsebenzi ezahlukahlukene. Ifanele amaqoqo aphakathi nendawo amakhulu wokukhiqizwa okuqhubekayo noma okuvuselelwa kabusha kokucubungula.
Langaphambilini I-Powder Liquid Mixer
Olandelayo: Umshini wokusabalalisa wobakaki ohleliwe
Impompo ye-emulsification yeselula ene-hopper
Iphampu yokuxuba ehambelana neselula ephezulu